लौ चिन्नुहोस,कुन महिला पत्रकार,कुन पार्टीको उम्मेद्धार ? – YesKathmandu.com
लौ चिन्नुहोस,कुन महिला पत्रकार,कुन पार्टीको उम्मेद्धार ?
बुधबार २०, बैशाख २०७४
पत्रकारिताको सिद्धान्तले भन्छ‘पत्रकार दलको मादल बन्नु हुन्न । तर हामी कहाँ त यी सबै भन्ने चीज मात्र हुन । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पत्रकारहरु खुलेरै दलको पक्षमा मात्र लागेका छैनन उनीहरु विभिन्न दलबाटै उम्मेद्धार नै बनेका छन ।
पेशाले पत्रकार महिलाहरु समेत यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्धार बनेका छन । यसरी उम्मेद्धार बन्ने महिला पत्रकारहरुको संख्या झण्डै दर्जन पुगेको छ ।
पार्टीबाट उपमेयर बन्ने टिकट पाएपछि सबैभन्दा बढी चर्चामा छिन कारोवारकर्मी ह्यापी ढकाल । उनी कांग्रेसबाट काभ्रेको देउपुर नगरपालिकाको उपमेयरमा उम्मेदवार बनेकी छिन । ।पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको उपमेयरमा कांग्रेसले पत्रकार सरस्वती गुरुङलाई उठाएको छ । सरस्वती कास्की आवाज राष्ट्रिय दैनिककी अध्यक्ष, रेडियो अन्नपूर्णकी सिनियर आरजे, पत्रकार महासंघको केन्द्रिय पार्षद हुन् ।
सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसि गाउँपालिकाको उपमेयरमा पत्रकार लक्ष्मी पौडेल उम्मेदवार हुन् । पौडेल पत्रकार महासंघ सिन्धुपाल्चोकको पार्षद हुन् ।
त्यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकाको उपमेयरमा राप्रपाले पत्रकार रीना गुरुङलाई उठाएको छ । गुरुङ कालिका एफएमकी स्टेशन म्यानेजर तथा टिभि कालिकाकी निर्देशक हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले माडीको उपमेयरमा पत्रकार सरिता महत्तोलाई उम्मेदवार घोषणा गरेको हो । केन्द्रले पत्रकार गंगा बराललाई धरान उपमहानगरपालिकाको उपमेयरमा सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै आरजे पवित्रा लामा काभ्रेमा राप्रपाका तर्फबाट वडा उपाध्यक्षको उम्मेद्धार बनेकी छिन । उनी वेवारिसे लाशहरुको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको संस्था एक्सन फर सोसल चेन्जको सक्रिय सदस्य समेत हुन ।
ताप्लेजुङमा भिषण आगलागी, तीन सरकारी कार्यालयसहित तीन दर्जन घर जले
सरकारको कामको समिक्षा गर्दै एमाओवादी
परराष्ट्रमन्त्री डा महत विभिन्न कार्यक्रममा
भृकुटीमण्डपबाट शिवलाल थापाले मागे प्रचण्डको राजीनामा
नाम ज्योतिष, काम यौनधन्दा
कोशी नदीको किनारमा मृत भेटिएका तीन बालकालिका एउटै घरका
सार्वभौमसत्तामाथिको चलखेल बन्द गरौँ : सांसद
पहिले पवित्र काठमाडौँ, अहिले रोगको खाल्डो
बाबुरामले ‘चक्मा’ दिएपछि प्रचण्ड फरार
गृहमन्त्रीको प्रशासन कब्जा शैलीमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तर्सिए, प्रधानमन्त्री मौन